Himalaya Dainik » यो त दलितको घर होनी ..ला मैले त खाइसकें अब के हुन्छ ? जवाफ कसैले दिन सकेनन्
यो त दलितको घर होनी ..ला मैले त खाइसकें अब के हुन्छ ? जवाफ कसैले दिन सकेनन्
एकजनाले उनलाई सुटुक्क कानमा फुके, ‘यो त दलितको घर हो नि, किन खाको ?’ त्यसपछि राजेशले गाइँगुइँको अर्थ बुझेछन् । उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘ला मैले त खाइसकें अब के हुन्छ होला ?’ राजेशको प्रश्नको जवाफ कसैले दिन सकेनन् ।
यस्ता घटनाहरू सुनाएर राजेश आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँछन्, ‘यसैले कथित दलित समुदायमाथि गरिने विभेदमा कुनै ‘लजिक’ छैन ।’ आफ्नै निवास कपुरधारामा राजेशले सुटिङका क्रममा देखेका र अनुभव गरेका यस्ता क्षणबारे सुनाए ।
एक्काईसौं शताब्दीमा कुनै जाति, वंश वा क्षेत्रमा जन्मिएका कारण मानिसलाई विभेद गरिनु समाजका लागि ठूलो लज्जा भएको राजेश बताउँछन् ।
कुनै पनि किसिमका मानवीय विभेद हटाउन अब समाजका सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्ने उनी ठान्दछन् । ‘आज दलितले भोगेको समस्या दलितको मात्रै होइन, यो नेपालको समस्या हो । जबसम्म हाम्रो समाजमा यस्ता विभेद रहन्छन् यसको असर पूरै समाजमा रहन्छ ।’ कान्तिपुरबाट
प्रकाशित मिति २४ कार्तिक २०७५, शनिबार १३:११